Fiahiana ny mpiasa: hampidirina Cnaps ireo miasa tena | NewsMada
Fiahiana ny mpiasa: hampidirina Cnaps ireo miasa tena
Tapaka tamin’ny filankevitry ny minisitra, ny faran’ny herinandro teo fa omena andraikitra ny minisiteran’ny Vola sy ny toekarena, minisiteran’ny Asa sy ny lalàna sosialy, miaraka amin’ny Cnaps hanao fanadihadiana momba ny fiahiana ara-tsosialy tokony ho an’ireo olona miasa tena, toy ny mpamboly, mpanjono, mpivarotra, mpanao asa tanana. Tokony hivoaka mialoha ny faran’ity taona ity ny valin’izany fanadihadiana izany. Aorian’izay tokony horaisina ireo fepetra rehetra ho fiantohana ireo miasa tena ireo. Tokony hihatra miandalana manomboka ny taona 2020 ny fanamoràna ny fisotroan-dronono, hifanaraka amin’ny didy aman-dalàna ankehitriny.
Omena telo volana koa ny Cnaps hanohy ny fanentanana hidiran’ireo mpiasa rehetra ho mpikambana ao aminy. Dila izay fe-potoana izay, tsy maintsy manao fanambarana ireo mpiasa rehetra sy ny mpampiasa hisian’ny fiahiana ara-tsosialy ho an’ireo mpiasa. Araka ny tarehimarika avy amin’ny Cnaps, 363 531 ireo mpiasa voasoratra ao aminy, ny taona 2018, ka 25 328 mandoa latsakemboka avy amin’ny sehatry ny fambolena. Mbola maro, noho izany, ny mpiasa tsy mandoa latsakemboka tsy mpikambana ao amin’ny Cnaps.
Araka ny famaritan’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa (OIT), ny hoe asa mendrika, ahafahana mamokatra sy ahazoana karama ara-drariny, misy fiarovana, misy fiahiana ara-tsosialy ho an’ny fianakavian’ny mpiasa, manome fahalalana …